Iindaba -Imicimbi eliqela efuna ingqwalaselo kufakelo lwee gaskets
I-gasket yindawo yokutywina emileyo esombulula "ukubaleka, ukukhupha, ukuvuza, kunye nokuvuza". Kuba zininzi izinto ezityaliweyo zokutywina, ngokungqinelana nezi fom zokutywina zimileyo, iigaskethi ezicaba, iiglasikhi ze-elliptical, ii-lens gaskets, iicones gaskets, i-gaskets ezingamanzi, ii-O-rings, kunye neebhokisi ezahlukeneyo zokuzibamba ziye zavela ngokufanelekileyo. Ufakelo oluchanekileyo lwegasket kufuneka lwenziwe xa uqhagamshelo lwesakhiwo se-flange okanye ulwakhiwo loqhagamshelo olusikiweyo, umphezulu wokutywinwa okungagungqiyo kunye negasket ngokungathandabuzekiyo kuhlolwe, kwaye amanye amalungu e-valve ahambile.
1. Phambi kokufaka i-gasket, galela umaleko we powder okanye umgubo we grafite oxutywe ne-oyile (okanye amanzi) kumphezulu wokutywina, i-gasket, umsonto kunye ne-bolt kunye neenxalenye ezijikelezayo ze-nut. I-gasket kunye ne-graphite kufuneka igcinwe icocekile.
2. Igasket kufuneka ifakwe kumphezulu wokutywina ukuze ibekwe embindini, ilungiswe, ingaphambuki, inganweneli kumngxunya wevalufa okanye uphumle egxalabeni. Ububanzi obungaphakathi be-gasket kufuneka bube bukhulu kunomngxuma ongaphakathi wobuso bokutywina, kwaye ubukhulu bangaphandle bube buncinci kancinci kunobubanzi bangaphandle bomhlaba wokutywina, ukuze kuqinisekiswe ukuba i-gasket icinezelwe ngokulinganayo.
3. Inye kuphela i-gasket evunyelwe ukuyifaka, kwaye ayivumelekanga ukufakela iziqwenga ezibini okanye nangaphezulu phakathi kwendawo yokutywina ukuphelisa ukunqongophala kwesithuba phakathi kweendawo ezimbini zokutywina.
4. I-oval gasket kufuneka itywinwe ukuze amakhonkco angaphakathi nangaphandle e-gasket adibane, kwaye iziphelo ezibini ze-gasket akufuneki zinxibelelane nomazantsi omjelo.
5. Ukufakwa kweeringi ze-O, ngaphandle kokuba iringi kunye nomjelo kufuneka zihlangabezane neemfuno zoyilo, isixa sokucinezelwa kufanelekile. Ukucaba kwesinyithi kumngxunya O-amakhonkco ngokubanzi yi-10% ukuya kwi-40%. Umgangatho wokucinezelwa kweerabha ze-O-amakhonkco ngu-cylindrical. Ukutywina okungashukumi kwinxalenye ephezulu yi-13% -20%; umphezulu wokutywina ongashukumiyo yi-15% -25%. Uxinzelelo oluphezulu lwangaphakathi, uxinzelelo loxinzelelo kufuneka lube ngaphezulu xa usebenzisa i-vacuum. Ngaphantsi kwesiseko sokuqinisekisa ukutywina, incinci inqanaba lokuncipha kwe-deformation, ngcono, obunokwandisa ubomi be-O-ring.
6. Isivingco kufuneka sime kwindawo evulekileyo phambi kokuba i-gasket ibekwe kwisiciko, ukuze ingachaphazeli ufakelo nokonakalisa ivelufa. Xa uvala isiciko, lungelelanisa indawo, kwaye ungaqhakamshelani ne-gasket ngokutyhala okanye ngokutsala ukunqanda ukufuduka kunye nokukrwela kwe-gasket. Xa uhlengahlengisa indawo yokugubungela, kufuneka usiphakamise kancinci isiciko, emva koko usilungelelanise kakuhle.
7. Ufakelo lweebaskethi ezibhotjiweyo okanye ezinomsonto kufuneka zibenjalo ukuze iigaskethi zikwindawo ethe tyaba (isiciko segasket yokuqhagamshela imisonto akufuneki sisebenzise iziqhushumbisi zemibhobho ukuba kukho isikrufu). Ukuqiniswa kokuqiniswa kufuneka kwamkele indlela yokulinganisa, enye, kunye nokusebenza, kwaye iibholiti kufuneka ziboshwe ngokupheleleyo, zicocekile kwaye zingakhululeki.
8. Phambi kokuba i-gasket icinezelwe, uxinzelelo, iqondo lobushushu, iipropathi zento ephakathi, kunye neempawu zezinto ze-gasket kufuneka ziqondwe ngokucacileyo ukumisela amandla okuqinisa kwangaphambili. Umkhosi wangaphambi kokuqiniswa kufuneka uncitshiswe kangangoko kunokwenzeka phantsi kovavanyo lokuba uxinzelelo loxinzelelo aluvuzi (amandla anyanzelekileyo wangaphambi kokuqiniswa anokuyonakalisa ngokulula i-gasket kwaye ayenze i-gasket iphulukane nokomelela kwayo).
9. Emva kokuba i-gasket iqinisiwe, kufuneka kuqinisekiswe ukuba kukho umsantsa wangaphambi kokuqiniswa kwesiqwengana sokudibanisa, ukuze kubekho indawo yokuqinisa kwangaphambili xa i-gasket ivuza.
10. Xa usebenza kumaqondo obushushu aphezulu, iibholiti ziya kufumana ukunyuka kobushushu obuphezulu, ukuphumla koxinzelelo, kunye nokwanda kwe-deformation, okukhokelela ekuvuzeni kwi-gasket kwaye kufuna ukuqiniswa kobushushu. Ngokuchasene noko, phantsi kweemeko zobushushu obuphantsi, iibholiti ziya kuncipha kwaye kufuneka zikhululwe kubanda. Ukuqinisa okushushu kukucinezelwa, ukukhululeka okubandayo kukunciphisa uxinzelelo, ukuqina okushushu kunye nokukhulula okubandayo kufuneka kwenziwe emva kokugcina iqondo lobushushu lokusebenza iiyure ezingama-24.
11. Xa i-gasket engamanzi isetyenziselwa ukutywina umphezulu, umphezulu wokutywina kufuneka ucocwe okanye unyangwe umphezulu. Umphezulu wokutywina tyaba kufuneka ungqinelane emva kokuguba, kwaye isincamathelisi kufuneka sisetyenziswe ngokulinganayo (isincamathelisi kufuneka sihambisane neemeko zokusebenza), kwaye nomoya kufuneka ubandakanywe kangangoko. Umaleko wokuncamathela ngokubanzi yi-0.1 ~ 0.2mm. Umsonto wokujija uyafana nomphezulu wokutywina tyaba. Zombini ezi ndawo zidibeneyo zoqhagamshelo mazibotshwe. Xa ujika ngaphakathi, kufanele ukuba ubume nkqo ukuququzelela ukukhutshwa komoya. Iglue akufuneki ibe ninzi kakhulu ukuthintela ukuchitheka kunye nokungcolisa ezinye iipavini.
12. Xa usebenzisa iteyiphu yefilimu ye-PTFE yokutywina umsonto, indawo yokuqala yefilimu kufuneka yolulwe ibhityile kwaye incamathele kumphezulu womsonto; emva koko iteyiphu engaphezulu kwindawo yokuqala kufuneka isuswe ukwenza ifilimu incamathele kumsonto ubume be-wedge. Kuxhomekeke kwisikhewu sentambo, ihlala inxeba amaxesha ama-1 ukuya kwayi-3. Isalathiso sokubhijela kufuneka silandele indawo yokujija, kwaye indawo yokuphela kufuneka ingqinelane nendawo yokuqala; ucofe ifilimu kancinci kancinci ubume bembambo, ukuze ubukhulu befilimu bulimale ngokulinganayo. Phambi kokujija ngaphakathi, cinezela ifilimu ekupheleni komsonto ukuze ifilimu ijijwe kumsonto wangaphakathi kunye nesikrufu; ukukrola kufuneka kucothe kwaye amandla kufuneka alingane; ungashukumi kwakhona emva kokuqiniswa, kwaye uphephe ukujika, kungenjalo kuya kuba lula ukuvuza.